Faah faahin:- Weerar hoobiyaal ah oo maanta duhurkii lagu qaaday xarunta madaxtooyadda Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar hoobiyaal ah oo maanta duhurkii lagu qaaday xarunta madaxtooyadda Soomaaliya
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa tiro hoobiyaal ah oo maanta lagu weeraray xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaas uu haatan shir uga soconaayo madaxda madasha wadatashiga qaran ee looga hadlaayo arrimaha dhameystirka qorshaha doorashada dalka ka dhici doonto sanadkaan 2016-ka.
Ilaa 4 hoobiye ayaa la sheegay inay ku dhaceen agagaarka iskoolka 15-may ee ku yaala dhabarka dambe ee xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, waxaana inta la xaqiijiyay hoobiyaashaasi ku geeriyooday 1 qof oo caruur ah, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay ilaa 6 qof kale oo dhamaan ahaa dad rayid ah.
Dhinaca kale, ilaa iyo haatan lama oga halka hoobiyaashaasi laga soo tuuray, waxaana weli soconaaya baaritaano ay wadaan ciidanka nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ay ku raad-joogaan goobihii laga soo tuuray hoobiyaashaas.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoona hore ay Al-shabaab sheegeen inay carqaladeyn doonaan shirarka kala duwan ee ka dhici doono magaalada Muqdisho.
Weerarkaan hoobiye ayaa kusoo beegmaya xilli xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya uu shir uga soconaayo madaxda shirka madasha wadashiga qaran iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka, waxaana shirkaasi uu yahay mid looga hadlaayo arrimaha dhameystirka qorshaha doorashada dalka ka dhici doonto sanadkaan 2016-ka.